Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || ढुंगेल पक्राउका तरंग – kayakairan.com
ढुंगेल पक्राउका तरंग
सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल लामो समयपछि पक्राउ परेका छन् । उनलाई मंगलबार पक्राउ गरी अदातल पेश गरिएपनि सदरखोर जेल चलान गरिएको छ । उनलाई पक्राउ गरिएलगत्तै दुईखाले प्रतिक्रिया सतहमा आइरहेका छन् । एकातिर शान्ति प्रक्रियाको मर्मविपरीत ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको भन्दै विरोधका स्वर सुनिएका छन् भने अर्कातिर नेपाल प्रहरीले उनलाई पक्रिएर कानूनी शासनको सम्मान गरेको भनिरहेका छन् । यो प्रकरणले प्रहरीमाथि लागेको कलंक मेटाउन सहयोग पुगेको छ भने सँगै विधिको शासनको सम्मान पनि भएको छ । साथमा शान्ति प्रक्रियामा यो प्रकरणले असर गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा बहस पनि सुरु भएको छ ।
माओवादीले संरक्षण दिइरहेका ढुंगेलमाथि २०५५ सालमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याको अभियोग लागेको थियो । उज्जनकुमारको हत्याको जाहेरी दिएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले उनका भाइ गणेशको पनि हत्या गरेको बताइन्छ । माओवादी नेता रहेका ढुंगेललगायतमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दामा जिल्ला अदालतले ढुंगेललाई अपराधी ठहर गरी कैद सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले उल्ट्याएपछि जेलमा रहेका बालकृष्ण ढुंगेल छुटेका थिए । पहिलो संविधानसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट सभासद् रहेका ढुंगेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । तर, त्यसपछि प्रहरीले पक्रेर कारागारमा नपठाएकाले ढुंगेल खुलारूपमा घुम्दै आएका थिए । प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश गरेपनि प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमै राखेको थियो । राजनीतिक प्रभावका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाएको उदाहरण बनेका ढुंगेललाई पक्रन नदिन माओवादी नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै धम्की दिँदै आएका थिए । माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहिआएका समेत कारणले ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रने आँट गरेको थिएन । ढुंगेल भने काठमाडौं र ओखलढुंगा जिल्लामा खुलारूपमा हिँडडुल गर्थे । ढुंगेललाई पक्रने आँट नगर्दा नेपाल प्रहरीको साखमात्र हैन मनोबलसमेत गिरेको थियो । यसैबीच ढुंगेललाई पक्रने सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश जारी गर्नु पूर्व नै अन्ततः ललितपुरबाट ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रेको हो ।
यतिखेर ढुंगेलको सजायलाई लिएर राजनीतिक रंग दिन थालिएको छ । उज्जन र गणेशको हत्या सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएकाले त्यसलाई सत्य निरुपण आयोगबाट टुंग्याउनुपर्ने बताउन थालिएको छ । माओवादी सरकारमा छँदा उनलाई आममाफी दिने प्रयास गरिएपनि प्राविधिक कारणले मिलेन । अब यो विषयलाई माओवादीले कसरी उचाल्छ ? एमालेले के भन्छ ? कांग्रेसले कसरी व्यक्त गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिने विषय होइन । सबै राजनीतिक दलले यस पक्राउलाई सहज र स्वाभाविकरूपमा लिएमा विधिको शासन सुदृढ हुनेछ ।
२०७५ मङ्सिर ४ गते मङ्गलबार
परिवारको जिम्मामा सुदीप
हचुवाको भरमा ‘जोन’ को बजेट
पहिले गाईले डुबायो, अहिले त्यसैले उता¥यो
रत्ननगरमा ११३ घरधुरी शौचालयविहीन